January 3, 2021 - Achawlaymyar
ဘုရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ထူးဆန်းစွာ အချိုရည်များထွက်နေ (ရုပ်သံ)
January 3, 2021 by Achawlaymyar
ဘုရားတညျနသေော ဘုရားဝနျးအတှငျး တမာပငျမှ ထူးဆနျးစှာ ခြိုမွသော သကာရညျမြား ထှကျရှိနေ ဇနျနဝါရီ(၃) AlinnMyay(အလငျးမွေ) မန်တလေးတိုငျး၊ နှားထိုးကွီးမွို့နယျ၊ ကနျကွီးကြေးရှာ၊ မိုးကောငျးကြောငျးတိုကျ၊ အတုမရှိရှသောလြောငျးဘုးရားဝနျးအတှငျး တမာပငျ မှ ခြိုမွသော သကာရမြေား ထှကျရှိနပွေီး လာရောကျ ကွညျ့ရှုသူမြား မြားပွားလြှကျရှိကွောငျး သိရသညျ သတငျး/ရုပျသံ-နိုငျလငျး AlinnMyay(အလငျးမွေ) ————————- ဘုရားတည်နေသော ဘုရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ထူးဆန်းစွာ ချိုမြသော သကာရည်များ ထွက်ရှိနေ ဇန်နဝါရီ(၃) AlinnMyay(အလင်းမြေ) မန္တလေးတိုင်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ကန်ကြီးကျေးရွာ၊ မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်၊ အတုမရှိရွှေသာလျောင်းဘုးရားဝန်းအတွင်း တမာပင်မှ ချိုမြသော သကာရေများ ထွက်ရှိနေပြီး လာရောက် ကြည့်ရှုသူများ များပြားလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ သတင်း/ရုပ်သံ-နိုင်လင်း AlinnMyay(အလင်းမြေ)
(၇) ရက် သားသီးများအတွက် အချစ်ဗေဒင် ဟောကိန်း . . . . . . .
(၇) ရက် သားသီးများအတွက် အချစ်ဗေဒင် ဟောကိန်း . . . . . . . တနင်္ဂနွေ အချစ်ရေး . . . . . ချစ်ရတဲ့သူကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ အနေဝေးနေကြတတ်ပါတယ်၊ ချစ်သူက အနိုင်ယူတာမျိုး ခဏခဏ ငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ချစ်သူကဘဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်သွားမယ် ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ . . . . . . တနလာင်္ အချစ်ရေး . . . . . ချစ်သူရဲ့ ချော့တာလေးကို နှစ်သက်ပေးမဲ့ ကိုယ်ကလိုက်ပြီး ချော့နေရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ် … Read more
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ သွေးမအေးကြစေဖို့…
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ သွေးမအေးကြစေဖို့… နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အနားမှာ အရိပ်တ ကြည့်ကြည့် ဂရုစိုက်ပေး နိုင်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေလည်း ရှိသလို၊ တစ်နယ်စီ ခြားနေကြတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ Long Distance Relationship (LDRS) လို့ခေါ်တဲ့ အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေ အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေက မလွယ်လှပါဘူး …။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနေဝေးနေတာကြောင့် သွေးအေးသွားကြမလား၊ သစ္စာရှိရဲ့ လား၊ နားလည်မှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် ဗျာများနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။ နေ့စဉ် တွေ့မြင် ထိတွေ့နေရတာမျိုး မဟုတ်တော့ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သွေးအေးသွားတာမျိုး တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ် …။ LDRS တွေအနေနဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ရေးကို တည်ဆောက်လိုတဲ့ အခါ … Read more
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေ ဖတ်ဖို့ ဖတ်ကြည့်ပါ …။
ခဏတော့ငိုပါ…အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေ ဖတ်ဖို့ ဖတ်ကြည့်ပါ …။ အသဲကွဲတိုင်း ငိုနေစရာလား ငိုမ်ိရင်ခဏပေါ့ မျက်နှာထသစ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် စိတ်လက်ကြည်သာတဲ့နေရာကို ထသွားလိုက်မယ်။ နဂိုအတိုင်း အချစ်ကို ပြန်မရနိုင်မှတော့ ဘာလို့များ မျှော်လင့်တောင့်တ ငိုကြွေးနေရမှာလဲ …၊ လောကမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံး လူဟာ ကိုယ်ဖြစ်သင့်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ လမ်းခွဲသွားလို့ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေစရာလား…၊ စိတ်ထိခိုက် ခံစားရရင် ခဏဆို လုံလောက်ပြီလေ …။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့အားအင်အသစ်တွေကို အမြန်ဆုံးမွေးယူပြီး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျော်ပျော်ပဲ နေလိုက်မယ်။ ချန်ထားခဲ့သူထက် တစ်နေ့ သာရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်တွေကို ပိုတောင် ကြိုးစားလိုက်ရုံပဲ …။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် … Read more
ကိုယ့်အနားက ဘယ်တော့မှ စွန့်ခွာ မသွားမယ့် ချစ်သူဆိုတာကို ပြနေတဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ကိုယ့်အနားက ဘယ်တော့မှ စွန့်ခွာ မသွားမယ့် ချစ်သူဆိုတာကို ပြနေတဲ့ လက္ခဏာရပ်များ အချစ်တွေဆိုတာ ရှိနေကြပေမယ့်လည်း အချစ်တွေ သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆီကနေ စွန့်ခွာသွားတတ်ကြတာပါပဲ။ အချစ်တွေ ကုန်သွားလို့ လမ်းခွဲရတဲ့သူတွေ ရှိသလို အချစ်တွေ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ ကိုယ့်အနားက စွန့်ခွာမသွားဘဲ ချစ်ပေးကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ စွန့်ခွာမသွားဘဲ အတူရှိနေပေးမယ့်သူဆိုတာကို ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) သင့်ကို မငြိုငြင်ဘူး ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ အဆိုးတွေကို သိရင်တောင် ဆိုးတဲ့ အချက်တွေလို့ပဲ လက်ခံလိုက်ပြီး ငြိုငြင်မှုတွေ မရှိတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ရှိနေတဲ့ အချက်တွေအတွက် စိတ်ဆိုးရင်ပဲ စိတ်ဆိုးမယ်၊ ငြိုငြင်ပြီး သင့်ကို ရှောင်ခွာ မနေတတ်ကြပါဘူး။ … Read more
ချစ်သူကောင်လေးအပေါ် မိန်းကလေးတွေ အမြဲလိမ်နေကျ စကား(၅)ခွန်း
ချစ်သူကောင်လေးအပေါ် မိန်းကလေးတွေ အမြဲလိမ်နေကျ စကား(၅)ခွန်း Relationship တစ်ခုမှာ ယောကျာ်းလေးတွေကပဲ လိမ်တတ်တယ်လို့ထင်ထားရင်တော့ သင်လုံးဝကို မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေနည်းတူ မိန်းကလေးတွေလည်း လိမ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လိမ်တယ်ဆိုတာကတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲအရာတွေကို လက်တွေ့မှာပြောင်းပြန်အနေအထားပြောဆို လိမ်ညာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစကားတွေက သင့်ကောင်မလေး သင့်ကို လိမ်နေပြီဆိုတာသိရအောင် ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ (၁) စိတ်မဆိုးပါဘူး မိန်းကလေးတွေစီက စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့စကားဟာ သိပ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အင်အားပြင်းလက်နက်ကြီးတစ်ခုပါ နော်။ စိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောလာရင်တော့ သေချာပါတယ် သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲက ဒေါသအလိပ်လိပ်ကို မြိုချကာ ဟန်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုရင်တော့ ဘာအမှားလုပ်မိလည်း ပြန်တွေးပြီး ချော့ဖို့သာပြင်ထားပါတော့ ကွီးတို့ရေ။ (၂) လာမချော့နဲ့ အချော့မကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လောက် ဒီကမ္ဘာမှာရှိနိုင်လားလို့ ရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်ပါ။ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝဖြစ်ပြီး ချော့ရမှာက ကွီးတို့ တာဝန်ဖြစ်တာကြောင့် လာမချော့နဲ့လို့ပြောလာရင်တော့ … Read more
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မှာမဟုတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ခု
အခဈြကို ကိုးကှယျမှာမဟုတျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာ (၅) ခု မိနျးကလေးတှဟော အရမျးခဈြမိသှားတဲ့ အခါမြိုးမှာ ဘာကိုမှမမွငျနိုငျတော့ လောကျအောငျ အခဈြကိုကိုးကှယျတတျ ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့ မိနျးကလေး တှကေတော့ ဘယျလောကျ ခဈြခဈြ အခဈြကို ကိုးကှယျမယျ့ သူတှေ မဟုတျကွပါဘူး။ အခဈြကို ကိုးကှယျမှာ မဟုတျတဲ့ အသိဉာဏျမွငျ့ မိနျးမတှရေဲ့ လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ (၁) မဟုတျမခံ အသိဉာဏျ မွငျ့တဲ့ မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ မှနျနတေဲ့ ကိစ်စတှကေို ခဈြသူက အတငျး စှပျစှဲတာတှေ ၊ ခဈြသူက အနိုငျကငျြ့တာ ၊ မမြှမတ လာလုပျတာ မြိုးဆိုရငျ ငွိမျခံနမေယျ့ သူမြိုးတှေ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ကို ဘလိုငျးကွီး အနိုငျလာယူတာ ၊ … Read more
“မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ပါ စကားလက်ဆောင်” မိန်းကလေးတိုင်း လှလှပပလေးနေပါပေါ့ပါးလွှတ်စွာ ဘဝ ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ဗဟုသုတ ရှိမယ့် စာတွေလည်း ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်အားကို ကိုးပြီး အလုပ်လည်းလုပ်ပါ။ မိန်းကလေးဆိုတာ အလှအပလည်း မက်တယ်။ကိုယ် အလှအပကြောင့် ဘဝ မလှတဲ့ အဖြစ်တော့အမြဲသတိထား စည်းကမ်းရှိရှိနေထိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းမူနဲ့အမြဲတမ်း သပ်ရပ်စွာ လှလှလေးနေတတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သပ်ရပ် သန့်ရှင်းမူတွေ နဲ့လှလှပပနေခြင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူတိုးစေပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်လို့အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်ပေးပြီး အသိပညာရစေမယ့်ခွန်အား ရှိစေမယ့် စာပေတွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်တယ်။ စာဖတ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လန်းဆန်းစေတယ်။ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မူတွေရှိတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရစေတယ်။ စိတ်နှလုံးသား လှပပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့လာ စေတယ်။ဘဝရဲ့ လောကဓံ ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်စေတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမသားတစ်လောက်နဲ့မတူအောင် … Read more
ကလေးဘဝ ကိုပြန်လွမ်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ အချစ်ဦးကို တန်းပြန်သတိရ တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာကောင်ကြီးတွေ မှမဟုတ်ပဲ အချစ်ဦး အတွက်ဆို သူရဲကောင်းကြီး အဖြစ်ရှိ ချင်ခဲ့ကြတယ်။ ကလေးဘ ဝကိုပြန် သွားတာနဲ့ အချစ်ဦးဆိုတာ ကလည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုလိုပါပဲ။အချစ်ဦးလို့ သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကို ကလေးဘဝက မသိခဲ့သေးတာရော Crush တယ်ဆိုတာထက်ပြီးမြတ်နိုးခဲ့ မိတာကြာင့်ရောပါ ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနှစ်သက်ပြီး ပြန်တမ်း တကြတဲ့အဖြူ စိမ်းကျောင်းသား ဘဝမှာဆို မနက်မိုးလင်းလို့ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့ လေးနဲ့ကိုယ် ကလေးတို့သဘာ ဝဆော့မယ် ကစားမယဒီလိုနဲ့ အချိန်ကုန်တတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဦးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက စိန်ပြေးတမ်း ကစားနေသလား ကြိုးခုန်နေသလား ဇယ်ခုပ်နေသလားဆို တာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား လိုက်ကြည့်ခဲ့ကြဖူး … Read more